Magacyada 18-kii qof oo Soomaalida oo ganacsiga Qaad Mareykanka loogu xiray – SBC
Magacyada 18-kii qof oo Soomaalida oo ganacsiga Qaad Mareykanka loogu xiray
Laamaha amaanka & la dagalanka doroogada wadanka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in 24 saac ka hor magaalooyin kala duwan oo ka tirsan wadanka Mareykanka ku qabqabtey ugu yaraan 18 qof oo asalkoodu yahay Soomaali balse haysta dhalasada Mareykanka kuwaasi oo la sheegay inay ka mid yihiin shabakad isku xiran oo Qaadka wadanka Mareykanka galin jirtey.
Kooxdan ayaa la sheegay inay yihiin shabakad ganacsiga khaadka ah oo ku kala sugan wadamada Mareykanka, England, Holand iyo Canada, kuwaasi oo Qaadka ganacsigiisa ku bahoobay.
Toban ka mid ah dadkan la qabqabtey waxay degan yihiin waqooyiga gobolka Virginia, labana Maryland, afarna New York halka labana ay degan tahay Ohio, waxaana waraaqo cadeyn ah oo la keenay maxkamada magaalada Alexandria ee Virginia lagu sheegay in kooxdan uu madax u yahay nin lagu magacaabo Yonis Muhudin Ishak,kaasi oo asalkiisu ka soo jeedo Soomaliya balse haysta dhalashada Mareykanka, ninkaasi oo degan deeganka Arlington ee gobolka Virgina.
Hogaamiyaha Shabakaddan Yuunis Isxaaq ayaa lagu eedeeyay inuu 14 qof oo ka mid ah dadkan u safrin jiray waddanka Ingiriiska, Kenya, Somalia, Itoobiya & Ugandha kuwaasoo boorsooyinkooda ku soo dhex qarin jiray qaadka kadibna keeni jiray Maraykanka isagoo ku bixin jiray lacag dhan $1000 halkii safar tagitaanka iyo soo noqoshadaba.
Isxaaq waxaa kale oo lagu eedeeyay inuu mar mar adeegsan jiray caruur khaadka lagu rari jiray si Booliiska aanay u baarin ama in iyaga lagu qabto khaadka. Waraaqaha maxkamaddu waxaa kale oo ay muujinayaan in dadkaani ay u isticmaali jireen dhanka Boostada,dhoofinta Qaadka oo la geeyo ilaa 15 gobol oo Maraykanka ku yaalla kuwaasoo ay ka mid yihiin California, Washington, Tennessee, New York, iyo caasimadda Washington, D.C.
Waraaqaha loo gudbiyay maxkamadda waxaa ku xusan in Qaadku saamayntiisu uu la mid tahay xashiishadda halista ah sida methamphetamine ama cocaine iyadoo la sheegay in Qaadka isagoo fresh ah la galin jiray gudaha dalka Maraykanka, isla markaana kooxdan ka sameysay aduun lacageed oo gaaraya 2.6 milyan oo doolar.
Dacwad ku oogayaasha ayaa dalbadey in dadkan midkiiba lagu xukumo xabsi gaaraya 20 sano, waxaana la sheegay in hadii dambigan lagu helo inay mutaysan doonaan ciqaab xabsi oo laba darsin oo sano ku dhaw.
Cabdulqaadir Ciise “Burane,” Muwaadin Mareykan ah oo asalkiisu Soomaali waxaa lagu soo oogay in uu gacan ku siiyey hogaamiyaha kooxda Isxaaq kala gudbinta Qaadka.
Sucaado Maxammed Cali Muwaadin Mareykan ah asalkeedu Soomaali waxaa lagu eedeeyey inay ku gacan siinaysay Isxaaq qaybtinta qaadka & soo galintiisa.
Xasan Eelay Muwaadin Soomaali ah oo haysta sharciga deganaanshaha Mareykanka, ku nool deegaanka Alexandria, waxaa lagu soo eedeeyey in uu qaabilsanaa qaybinta qaadka & dhaqadiisa.
Axmed Xasan Dirir Muwaadin mareykan ah asalkiisu Soomaali ku nool deegaanka Alexandria, waxaa lagu soo eedeeyey in uu qaabilsanaa qaybinta qaadka & dhaqadiisa.
Yoonis Beyene “Yonka” Muwaadin Mareykan ah asalkiisu Soomaali ku nool deegaanka Alexandria, waxaa lagu soo eedeeyey in uu qaabilsanaa in uu soo kireeyo gawaarida qaadka lagu qaado isla markaana Isxaaq uu u adeegsan jirey in uu Qaadka safriyo uuna qaybiyo.
Ismaaciil Cabdi, muwaadin Soomaali ah haysta deganaanshaha Mareykanka waxaa lagu soo eedeeyey in gurigiisa qaadka lagu dajin jirey, lagu keydin jirey isla markaana uu ku gacan siiyey hogaamiyaha kooxda qaybinta & soo galinta Qaadk.
Hibo Samantar loo yaqaan Faadumo, Muwaadin Mareykan ah asalkeedu Soomaali ku nool deegaanka Annandale, ee gobolka Virginia, waxaa lagu soo eedeeyey inay qayb ka qaadatey soo galinta qaadka Mareykanka, iibintiisa, dhaqidiisa & waliba qaybintiisa.
Cusmaan Yuusuf Osman Muwaadin Mareykan ah asalkiisu Soomaali ku nool deegaanka Clifton ee magaalada New York in uu ahaa nin qaabilsanaa dhanka dhaqaalaha isla markaana uu lacagaha xawili jirey, uuna lacagaha ka qaban jiray dadka qaadka iibsada.
Cabdiraxmaan Jibriil, muwaadin Soomaali ah haysta deganaanshaha Mareykanka, waxaa lau soo eedeeyey in uu shaqaale ka ahaa qaad iibinta uuna lacagaha u gudbin jirey dadka dibadaha ku sugan ee qaadka u soo dira Mareykanka.
Cabdi Maxamed “Juba” muwaadin Soomaali ah oo haysta deganaanshaha Mareykanka ku nool deegaanka deegaanka Parkville, ee gobolka Maryland, waxaa lagu soo eedeeyey in uu ka mid ahaa kooxda gudbinta khaadka & soo galinta iyo waliba ganacsigiisa.
Haarun Salxaan muwaadin Mareykan ah asalkiisu yahay Soomaali degan deegaanka Parkville, ee gobolka Illinois waxaa lagu soo eedeeyey in uu ka caawinayey madaxa kooxdan Isxaaq qaybinta & soo galinta khaadka, isla markaana uu u xilsaarnaa qaybinta qaadka ee gobolka Maryland.